Ukungena kweSunning kwiCoronavirus Panic nguGqr. Wolfgang Wodarg? : UMartin Vrijland
Ukungena kweSunning kwiCoronavirus Panic nguGqr. Wolfgang Wodarg?
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	19 Matshi 2020	• 6 Comments
UWolfgang Wodarg ngugqirha waseJamani kunye nezopolitiko ze-SPD. Njengosihlalo weNdibano yePalamente yeKomiti yezeMpilo yeBhunga laseYurophu, uWodarg watyikitya isisombululo ngomhla weshumi elinanye kuDisemba ka-18, esasixoxwa kancinci kwingxoxo kaxakeka ngoJanuwari ka-2009. Ukwabize ukuba kwenziwe uphando malunga neempembelelo ezingekho mthethweni zeenkampani zamayeza kwiphulo lomkhuhlane wehlabathi we-H2010N1.
Omnye umsindo we-coronavirus
UGqr. UWodarg uthi kukho intetho malunga nefani yentsomi "Ikumkani ayinazinxiboApho kungekho mntu waba nesibindi sokutsho ukuba i-Emperor yayinganxibi mpahla. Akukho mntu waba nesibindi sokuyibona le nto; ngaphandle kwenkwenkwana. Wonke umntu wabonakala enikezela kwiingcinezelo zoontanga.
Lo myalezo kungenzeka ukuba ugxothwe njengeendaba ezingezizo ngamajelo osasazo ngokubanzi okanye uvavanyiwe ngokupheleleyo kwi-Facebook. Okanye ngaba uFacebook uza kuwuyeka lo myalezo? Ndiza kukubonisa ngesizathu sokuba ndicacisa ezantsi kwinqaku.
Phantsi korhulumente wobukomanisi bexesha elizayo, uya kuva ibali elinye kuphela. Emva koko kufuneka uphulaphule inyaniso emiselweyo ye-politburo. Ukuba urhulumente wobukomanisi bobuchwephesha ngoku uqhubeka ngokukhawuleza, phantsi komgaqo we-coronavirus, ndicacisa ngokweenkcukacha eli nqaku.
Kwindlela endiyithandayo, sibona ukudlala kweenkokheli zelizwe zonke apho kuqhamke khona isifo seengqondo (PsyOp). loo nqaku Chaza. Ngaba oko kuthetha ukuba i-coronavirus ayikho? Hayi, loo coronavirus mhlawumbi ikho. Nangona kunjalo, loo nto ayibandakanyi ukuba inokuba yinto ephilayo yesazela. Kusenokwenzeka ukuba ukwenzakala kwayo kungachaphazeleki ngendlela eyiyo.
Sikubona ukutyhilwa 'komgaqo-nkqubo' endiwuchazayo kwincwadi yam. Ngoku ubonile ukuba ndenze uqikelelo oluchanekileyo, lixesha lokulahla ibala lokucinga ngokuqulunqa iyelenqe lokwazi ukuba 'yi-master script', ukuze ukwazi ukubona ukuba kuqhubeka ntoni kwaye ukusuka ngoku ukuya phambili ungathatha isikhundla. Kwincwadi yam sele ndixela kwangaphambili ukuba kuya kubakho omnye ubhubhani onje. Nceda uyifunde le ncwadi kwaye emva koko ufunde apha ngezantsi esi sixhobo nokongezwa kwincwadi.
Imbiza enobusi, elawulwa ngokuchaseneyo
Kungenzeka ukuba uGqr. I-Wodarg isetyenziselwe ukuhambisa isandi esibonisa ngokucacileyo (jonga ividiyo engezantsi); Isandi esigxekayo esichukumisa inyaniso, kodwa sibonisa ngamabomu iimpazamo, ukuze kamva sigxothwe njengeendaba ezingeyonyani. Umzekelo, ubalo lwendaba kumajelo entlalontle lunokuqaliswa kwaye iwebhusayithi enje nge-martinvrijland.nl inokunyanzelwa ukuba ivale (ukuba bendiyakuba negadi kuyo). Umdlalo udlalwa ngendlela ephucukileyo.
Injongo yesi sicwangciso? Zama ukukholisa wonke umntu ukuba nantoni na engeyiyo iindaba eziphambili zeendaba ziyindaba ezingeyonyani.
Le ndlela ibizwa ngokuba sisicwangciso sobuchule 'sombiza wobusi'; isicwangciso apho iinkonzo zibeke umngxuma ngokuxuba i-95% yenyani kunye nolwazi olungachanekanga kwaye luqalise (ngokwakho) nge-pawn (inkcaso elawulwayo). Ke andinakuqiniseka ngokuqinisekileyo ukuba ngaba ibali likaGqr. UWolfgang Wodarg uchanekile ngamanani. Ndingavuma kuphela ukuqonda kwam. Ungalufumana olu lwazi apha kwiwebhusayithi nakwincwadi yam.
Nangona kunjalo, kuyayimfuneko ukuthathela ingqalelo iindlela ezilawulwayo eziphikisayo 'zebhotile yobusi'. Uya kuyiva phantse yonke le nyaniso, kodwa iya kufakwa ityhefu ngefake kancinci, ukuze ekugqibeleni umntwana aphoswe ngaphandle ngamanzi okuhlamba.
Ubungxowankulu kunye ne-sham yedemokhrasi, indlela ecothayo eya kubuKomanisi
tags: i I, Alexander, Unxibelelwano, coronavirus, Dr., eziziimbalasane, geen, isandi, unayo, Uhanahaniso I, umbusi, ukubhuqa, iimpahla, ezopolitiko, psyop, Itekhnoloji, I-Wodarg, Wolfgang
21 Matshi 2020 kwi-10: 18
Kuyamangalisa ukubona ukuba ezopolitiko (ukuba ujonga eNetherlands) zonke zikwiphepha elinye. Ukusuka ekhohlo ukuya ekunene, bonke bathabatha inxaxheba kwi-hype. Umahluko kuphela kwindlela, apho amaqela angasekunene nangakwesobunxele afuna ukuvalwa ngokupheleleyo kwaye amaqela athile aphakathi afuna ukuvalwa okuphakathi. Kodwa kumgaqo konke konke kuyilo iyelenqe kwaye bonke bayabandakanyeka. Oku kuya kusebenza kumajelo eendaba, akukho mntu unokuthandabuza ukuba intsholongwane ye-corona imbi kakhulu kwaye nokuba amanyathelo awangaphezulu na (umzekelo u-1000x).
Nangona kunjalo, kusekho abantu abakwi-NL (mhlawumbi ngaphezulu kokuba sicinga) abanamathandabuzo anzulu okanye angathathi ntweni malunga nokuqhubekayo, kwaye uJensen ukhutshiwe ngenxa yoko. UJensen unokubamba abathandabuzi kunye nabantu abangayikholelwayo, angakwazi ukugcwalisa umsebenzi "wethontsi" eNetherlands kubantu abangakholwayo.
Kutheni abantu besenza lento? UJensen uxela iinyani ezininzi kwi-podcast yakhe, kodwa kunjalo ukubhaja okubandayo kuza xa ebonisa ukuba kutheni abantu abaphezulu bekhupha le coronavirus: Uthi kungenxa yokuba uTrump kufuneka oyiswe, kwaye kuba "uLungile" (ngokuchasene ne-globalism) wayewina kwaye loo nto kufuneka yoyiswe kube kanye ngokukhutshwa koobushiqela bokulwa i-corona.
Ke ubamba abathandabuzayo nabantu abangakholwayo, aze ke abathumele ehlathini.
21 Matshi 2020 kwi-10: 51
IJensen ngumgca wokugqibela kwaye kufuneka babambe abafundi kude neVrijland. Uqhubeka ngokuthengisa iTrump njengeqhawe. Hayi, bendiyibhala iminyaka: bonke abapolitiki ukusuka ekhohlo ukuya ekunene ziimaski ezahlukeneyo kubuso obufanayo. UJensen akazange abhekise kum. Akukho mntu ulangazelelayo kwaye onokuthi abhekisele kum nakwincwadi yam. Esona sisongelo esikhulu kubo.
21 Matshi 2020 kwi-11: 02
Ngelishwa, uninzi lwabantu lukhaba kule “sigcawu sesikhova” esilawulwayo.
21 Matshi 2020 kwi-13: 08
Mhlawumbi ababeki zimvo bangathumela izimvo kwi-podcast ye-youens ye-youens ngekhonkco kule ndawo. Mhlawumbi zonke ezo zimvo ziya kususwa ngononophelo kwangoko, kodwa ukuba akunjalo, kuhlala kusenzeka ukuba abanye baphelela apha.
Intloko yentlanzi wabhala wathi:
21 Matshi 2020 kwi-11: 39
UMartin uya esiba ngokuthe tye
KumnandiBabylon wabhala wathi:
21 Matshi 2020 kwi-12: 16
Ukuthetha ngentshutshiso elawulwayo, u-Jensen akakho omnye wabo
« Indlela yokujongana neendlela ze-coronavirus (zokutshixa): iingcebiso ezisebenzayo
Funda ukuba wenze ntoni kwaye wenze ntoni kwi-coronavirus lockdown ezayo »
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.346.860
UMartin Vrijland op I-Trump, Q-Anon kunye 'nokucoca ubunzulu beentsomi' (Robert Jensen, Janet Ossebaard)
Future op Ukuwa kwe-cabal 'engenantsingiselo kwaye ngoobani' Q Anon 'Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers)?
UPeter Steegmans op I-Trump, Q-Anon kunye 'nokucoca ubunzulu beentsomi' (Robert Jensen, Janet Ossebaard)